I-Long Island Science Museum
Funda ngeNzululwazi kwiNassau kunye neCosfolk Counties
Enoba wena nowekho unomdla kwi-astronomy, i-geology, iimfihlelo ze-DNA okanye ezinye izihloko, kukho imyuziyam enxulumene nesayensi kwi-Long Island ukufundisa nokuzonwabisa. Ukusuka kwi-Cold Spring Harbour Whaling Museum, ekujoliswe kuyo kwimboni yaseHong Island eyadlulayo kunye nokulondolozwa kwamanqamzana amakhulu, namhlanje kwi-DNA Learning Center kunye nobutyebi bayo benkcazelo malunga nokusebenza kwamajelo, i-Long Island, eNew York inikezela ngeendwendwe kunye nabahlali ngokufanayo iintlobo zeemyuziyam.
Nalu uluhlu ukufumana wena kunye nentsapho yonke uqale kwi-LI adventure yesayensi.
IMusic Museum ye-Brookhaven
Titshala, qaphela: iMusic Museum ye-Brookhaven inikezela nge-FREE programs kunye neetyelelo zebhu ebantwaneni kubanga 1 ukuya kwe-8. (Qaphela ukuba ootitshala baya kufuneka benze amalungiselelo abo ebhasi okanye kwi-van ukuthutha abafundi abasendaweni. ) U
Kukho iiprogram kunye neendibano zocweyo zokufundisa.
I-Cold Spring Harbour Whaling Museum
Ngemiboniso elandelwayo eyadlulayo ye-Cold Spring Harbor, i-museum ibonisa iinkqubo zentsapho ezihleliweyo rhoqo ngonyaka. Unako nokuba nemibutho yokuzalwa yabantwana kwiimyuziyam, kwaye nabo banokusingatha iimyuziyam ezinqamlekileyo kwiintsuku ezicwangcisiweyo.
Lo myuziyam obalaseleyo uphawula imbali yokubalekela kumaphupha okuphuphuma kwiibhaluni zomoya ezishisayo ukuya kwi-Long Island yokuqala yendiza ngo-1909. Ababhenkethi baya kubona iinjongo eziphathekayo ziquka i-airplane yodade kaCharles Lindbergh "uMoya waseSt. Louis", iPhabliki P-84B Thunderjet eyakhiwe e-Farmingdale, i-Grumman Lunar Module LM-13, eyakhiwe kwiBetpage ngo-1972, kunye nokunye okunxulumene neenqwelo kunye nezinye iimishini ezikhuphuka esibhakabhakeni.
I-DNA Learning Centre
I-Dolan DNA Learning Center inikezela ngeenkqubo ezikhululekile kuluntu. Ukongeza, ngomnye umgqibelo ngenyanga ukusuka ngo-Oktobha ukuya kuJuni, kukho i-DNA yeMgqibelo! iprogram, enye ineminyaka engama-10 ukuya kwe-13 kunye nomntu omdala ohambahambayo kunye nabanye abafundi abaneminyaka eli-14 ukuya kumdala nabahamba kunye nabadlali abathabatha ngaphantsi kwe-15. Iindleko zi-$ 15 ngomntu kunye nazo zonke iiseshoni zokugqibela iiyure ezimbini. Iindibano zokuqeqesha zootitshala ziyafumaneka.
I-Garvies Point Museum & Preserve
I-Museum yeGarvies Point kwaye igcine imbali yembali yendalo kunye neyendalo ye-Long Island, kunye nemiboniso enxibelelwano kunye nokunye kwi-geology yeSiqithi, kwaye kugxila kwizinto zakudala zaseMelika.
I-Hicksville Gregory Museum - I-Long Island Earth Science Centre
Ukususela kwingqokelela yamatye ekhangayo kuquka ama-fossils kunye nomboniso wamatye e-fluorescent ukuya kwi-5 1/2-foot foot replica ye-Mosasaur skull, i-Hicksville Gregory Museum inika umbono oncomekayo kwihlabathi leNzululwazi yoMhlaba.
Iimyuziyamu inikezela ngeenkqubo ezahlukeneyo zemfundo kwiNzululwazi yomhlaba, kwaye ezi zizo zonke iinqanaba leminyaka. Kukho iindwendwe kubahlali abakhulileyo, isikolo kunye namanye amaqela. Uhambo lweeNkundla lufumaneka. Ukuze ufumane olungakumbi, qhagamshelana neyamyuziyamu.
I-Long Island Aquarium & I-Exhibition Centre (eyayisakuba yi-Atlantis Marine World)
Kwiziko le-Long Island Aquarium & Exhibition Center (owayebizwa ngokuba yi-Atlantis Marine World), yonke intsapho inokufumana ama-marine asebenzisanayo, jonga itanki enkulu enokwakheka (kwaye unokwenza ukuba ulungele i-diki ye-shark ukuba uyalindela!), Khangela ingonyama yolwandle yangaphandle ibonisa, kunye nokunye okuninzi.
Isikolo saseSong Island Science
Kwiziko leScience Island, ukufunda nokuzonwabisa, iinkqubo ezisebenzisanayo, iinkqubo zemfundo zenza isayensi iphile kubantwana nakwiintsapho. Kukho iinkqubo zokujonga, uqeqesho lootitshala, amaqela okuzalwa wesayensi kunye nokunye okuninzi okukhoyo.
Ukongezelela, iinkqubo zesikolo kunye nezandla zokufikelela kwizandla ezifanelekileyo ubudala kubantwana abasuka kwi-K ngaphambi kwesikolo esiphakamileyo.
IMyuziyamu yeSayensi yeLong Island
Nangona oku akusiyo yonyuziyamu yakho apho ungakhohlisa khona kwaye uhambahamba, kukho ininzi yokwenza kwiMzululwazi ye-Science yaseLong Island. Esi sikhungo senzululwazi yesenzululwazi sinamasifundisane ezandla zesayensi, zonke ezifuna ukubhaliswa kwangaphambili. Ezi workshops zicwangciselwe ngokubanzi abantwana ngexesha lokuphumla kwesikolo nakwiimini zeveki.
Iimyuziyam zibonelela ngeendlela zokuhamba ezenziwa ngabafundisi kunye neenkokheli zentlalo ukuze bacebise izifundo zabo zesikolo rhoqo.
Ukutyelela iMyuziyamu yeSayensi ye-Long Island kwiwebhusayithi ukufumana ngemisebenzi yabo ecwangcisiweyo, kwaye ukuba ufuna ukuzonwabisa kwiimyuziyam, kufuneka ubhalise enye yeenkqubo zazo. Ifowuni yabo yobhaliso kwi-(516) 627-9400, isongezelelo-10 ukutyikitya.
Indlu yaseGold Coast yangaphambili yayiyifa likaWilliam K. Vanderbilt II. Ngaphakathi kwesikhala esingamahektare angama-43, uya kufumana iminyuziyamu yolwandle, iimpawu zembali yemvelo, ukuqokelela izinto ze-ethnographic kunye nokunye.
Kukho i-planetarium eneemiboniso zesibhakabhaka ezihleliweyo.
Hlola i-website ye-Vanderbilt Museum kwiindibano zocweyo zabantwana kunye nabadala kunye neenkqubo zehlobo zasehlotyeni.
Ukufumana iPasipoti yaseMerika e-Long Island
Iphunga lichithwa kwi-Long Island
I-Wölffer Winery: Ukukhutshwa kweSenational and Sharing in the Hamptons
Iikhowudi ze-Zip kwiNassin County, Long Island, eNew York
Ukunqanda i-Birdwatching kwi-Long Island
I-Blossom Kite Festival 2018 eWashington, DC
Oko Uza kubona Ngethuba loSkorkeling okanye iDaving eTahiti
Yiyiphi i-Money Belt kwaye Ngaba Ufanele Uhambe Ngenye?
Khu seleko kunye neNshisi
Unokufumana njani ukusuka eLondon, e-UK naseParis ukuya eByarritz
USemana Santa eAlacucho, eCuzco, eHuaraz naseTarma, ePeru
I-Metro Detroit Iziganeko kunye Nezinto Ezokwenza Ngo-Ephreli
Izinto Ezozenza Ngabantwana kwilizwe laseTexas Hill
ETexas Iingqungquthela ezine zeJulayi
I-Epic Exteriors ne-Outdoor Decks
Kuphi kwiPaki eHartsfield-Jackson Atlanta International Airport
Indlela yokukhetha isiqithi saseCaribbean esilungileyo kwixesha lakho lokuphumla
Uhlobo lweeNkcubeko zamaMama kwi-Day Day 2017
Busch Gardens eTampa Bay
Umhlaba weFerrari e-Abu Dhabi